Nyore bhinzi saladhi ine anchovy vinaigrette | ThermoRecipes
Bhinzi saladhi ine anchovy vinaigrette
Kutanga45 maminitsi6 vanhu180 makarori
kubudikidza Ascen Jiménez
Nhasi tinokukurudzira iwe kutanga kubva maruva: anonaka Bhinzi saladhi. Pasina kupokana, iyo yakanaka nzira yekuunza iyi legume patafura pamazuva anopisa.
Taisa maviri chives chakachekwa asi unogona kuzvitsiva nehanyanisi. Tisati tavabatana navo kune zvimwe zvinosanganiswa isu tichagadzira mhando ye magaka nekukurumidza, uchivafambisa mumusanganiswa wemvura nevhiniga.
Tichaisawo madomasi, maorivhi matema uye yepakutanga anchovy muto.
1 Bhinzi saladhi ine anchovy vinaigrette
Saladi yakanaka yezhizha iyo inogona kupihwa sekosi yekutanga kana sekushongedzwa.
Kubika nguva: 35M
Nguva yakazara: 45M
Kune iyo yakasvinwa chives:
75 g yemvura
75g chena waini vhiniga
6 anchovies mumafuta (akacheneswa)
60 g yemamwe maorivhi emhandara emafuta
Yakaomeswa anonhuwirira miriwo
500 g yenyuchi dzemumagaba, dzakatobikwa
5 cherry matomatisi, akachekwa
Anenge gumi akachekwa maorivhi matema
Cheka chives muzvimedu zvidete. Isa mvura nevhiniga mundiro, pamwe chete nema chives akachekwa. Tinovasiya vakadai, mumusanganiswa iwoyo wemvura nevhiniga, kwemaminitsi angangoita makumi matatu.
Ipapo isu tinoisa gariki clove, maanchovies, maorivhi, mhiripiri nemiti inonhuhwirira mugirazi. Isu tinoronga 30 masekondi, kumhanya 4.
Isu tinodurura bhinzi uye nekuwacha pasi pemvura inoyerera inotonhora. Tinovaisa mundiro huru. Tinosvina chives (iyo mvura haizotibatsire) uye ndokuiisa, yakadhonzwa, pabhinzi. Tinowedzera madomasi uye maorivhi matema.
Isu tinodiridza zvese nemuto wedu uye sanganisa zvakanaka.
Tinoramba tiri mufiriji kusvika nguva yekushandira.
Mamwe mashoko - Pickled aubergines (Almagro mhando)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Thermorecetas » General » Bhinzi saladhi ine anchovy vinaigrette
Bacon uye cheese muffin
Sipinachi roll nesalmon